यस्ता छन डा. केसीका १६ औं सत्याग्रहका मागहरु « LiveMandu
२६ पुष २०७५, बिहीबार १२:३४
डा. गोबिन्द केसी इलाम पुगेर बुधबार देखि १६ अनसनमा छन । स्वस्थ क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर पटक पटक अनसन बसेका केसीका माग सरकाले पुरा हुन्छ भन्दै अनसन तोडाउने तर माग पुरा नगर्ने गरेको छ । डा. केसीका मागहरु प्रत्यक अनसनमा केहि परिवर्तन भइरहेका छन ।